काठमाडौं । के तपाईं तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ ? श्रीयोग डटकममा आफूलाई सूचिकृत गराउनुस । तपाईंलाई रोजगारीको अबसर आउन थाल्ने छ । छनौटको अबसर तपाईसँगै हुनेछ । कुन काम गर्ने, कुन नगर्ने । बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरेर श्रीयोगले नयाँ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसमा विभिन्न पेशासँग मिल्ने योग्यता बनाउने ब्यक्तिहरुले आफ्नो नाम,...
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थामा फेरि पनि जागिरको बग्रेल्ती अवसर खुलेको छ । बुधबार २ वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका २ विकास बैंकले २५० बढी कर्मचारी मागेका छन् । सिद्धार्थ बैंक र एनसीसी बैंकले १ सय ४५ कर्मचारी मागेका छन् भने राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक सांग्रीला र गण्डकीले ७० भन्दा बढी कर्मचारी मागेका छन् । सिद्धार्थ बैंकले...
एसबीआई र लक्ष्मी लगायतका बैंकमा सयौंका लागि जागिर खुल्यो, फ्रेसलाई प्राथमिकता
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा सयौं संख्यामा जागिरको अवसर खुलेको छ । नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी बैंक, ज्योति विकास बैंक र बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लगायतमा जागिरको बग्रेल्ती अवसर खुलेको हो । यी चारैवटा बित्तीय संस्थाले विभिन्न पदमा सयौं कर्मचारी मागेका हुन् । नेपाल एसबीआई बैंक लिमीटेडले इन्टी लेभलको जुनियर असिस्टेन्ट...
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडले एकैसाथ फ्रेस जनशक्तिका लागि निकै ठूलो जागिरको अवसर खुलाएको छ । शाखा सञ्जालमा देशकै ठूलो बैंक एनआइसी एशियाले इन्ट्री लेभलको ट्रेनी असिस्टेन्ट पदमा २०० कर्मचारी मागेको हो । बैंकले काठमाण्डौभित्र र बाहिरका विभिन्न कार्यालयहरुमा काम गर्ने गरी कर्मचारी मागेको हो । बैंकले क्षेत्रीय...
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो बैंक, नेपाल बैंक लिमीटेडले एकैसाथ ३ सय ९६ कर्मचारी मागेको छ । यो बैंकले मुख्य कार्यालयदेखि प्रदेशस्तरका कार्यालयका लागि यति धेरै जनशक्ति मागेको हो । मुख्य कार्यालयका लागि सहायक प्रबन्धकतर्फ ७८ जना र सोही पदमा रहने गरी आइटीमा काम गर्ने जनशक्ति २ जना गरी कुल ८० जना कर्मचारी मागिएको छ । यस्तै, प्रदेशगत...
बिमा समितिमा खुल्यो जागिरको अवसर, निर्देशकदेखि प्रशासन सहायकसम्म माग
काठमाण्डौ । बिमा समितिले ८ वटा पदका लागि १६ जना कर्मचारी मागेको छ । समितिले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै १६ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । निर्देशकदेखि प्रशासन सहायकसम्मका पदका लागि जागिरको अवसर खुलाइएको हो । निर्देशकतर्फ १ जना, उपनिर्देशक २ जना, सहायक निर्देशक १ जना, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट २ जना, सहायक...
काठमाण्डौ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका ८ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले विभिन्न ९ पदमा दर्जनौका लागि जागिरको अवसर खुलाएको छ । यो लघुवित्त संस्थाले स्थायी पदपूर्तिका लागि सहायक प्रबन्धकदेखि सहायक सम्मका पदमा जागिरको अवसर खुलाएको हो । कम्पनीले व्यवस्थापकीय स्तरमा काम गर्ने गरी एकजना सहायक...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमीटेडले निकै ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै एकैपटक ४९६ जना कर्मचारी मागेको हो। बैंकले ५२ जना ब्राञ्च म्यानेजर मात्र मागेको छ । सबैभन्दा बढी ट्रेनी असिस्टेन्टको रुपमा १०० र रिलेशन अफिसरको रुपमा १०० कर्मचारी मागिएको छ । यस्तै, म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको रुपमा ८० जना, ५०...
मेगा बैंकले एकैपटक माग्यो ११४ कर्मचारी, कुन पदमा कति ?(सूचिसहित)
काठमाण्डौ । मेगा बैंकले अधिकृत स्तरदेखि सहायक स्तरसम्मको पदमा एकैपटक ११४ कर्मचारी मागेको छ । बैंकले आइतबार आवश्यकता सम्बन्धी एक सूचना प्रकाशित गर्दै म्यानेजर लेभलदेखि असिस्टेन्ट लेभलसम्मका विभिन्न पदमा ११४ कर्मचारी मागेको हो । म्यानेजर लेभलका लागि ३ जना, अफिसर लेभलका लागि ३८ जना र असिस्टेन्ट लेभलका लागि ७३ कर्मचारी मागिएको हो...
काठमाण्डौ । रुपन्देहीमा मुख्य कार्यालय रहेको उन्नति माइक्रोफाइनान्सले विभिन्न ६ पदमा दर्जनौ कर्मचारी मागेको छ । यो कम्पनीले असोज १५ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सहायक प्रबन्धकदेखि कनिष्ठ सहायकसम्मको पदमा कर्मचारीमा मागेको हो । इच्छुकले यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा दरखास्त दिइसक्नुपर्नेछ । कम्पनीले सहायक...
नागरिक लगानीकोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुने, दरखास्त आह्वान
काठमाण्डौ । सरकारले नागरिक लगानीकोषको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत गठित छनौट तथा सिफारिस समितिले एक सूचना प्रकाशित गर्दै कोषको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । कोषको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि योग्यहरुले असोज २२ गतेभित्र अर्थमन्त्रालयको बित्तीय...
बैंक, बिमा र लघुवित्तले खुलाए बग्रेल्ती जागिरको अवसर(सूचिसहित)
काठमाण्डौ । विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले बुधबार पनि थुप्रै जनशक्ति माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेका छन् । केही विकास बैंक, केही लघुवित्त कम्पनी र केही बिमा कम्पनीहरुले निकै ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेका हुन् । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, देवः विकास बैंक लिमीटेडले विभिन्न ४ पदमा दर्जनौ कर्मचारी मागेको छ । यो बैंकले...
काठमाण्डौ । नवील बैंक लिमीटेडले एकैसाथ १२५ जना फ्रेस जनशक्ति मागेको छ । बैंकले ट्रेनी असिस्टेन्टको रुपमा १०० जना र म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको रुपमा २५ फ्रेस कर्मचारी मागेको हो । अछाम, बैतडी, बझांग, डडेलधुरा, डोटी, जुम्ला, कालीकोट, सुर्खेत, सल्यान र रुपन्देही जिल्लाका गाउँपालिकाहरुमा निकट भविष्यमा स्थापना हुने बैंकका शाखाका लागि १००...